बुद्धको मुर्ति तोडफोड गर्नेलाई वीर गोर्खालीको एक्सन,सनातन धर्ममाथिको आक्रमण सैहय नहुने चेतावनी ! – Himalitimes
बुद्धको मुर्ति तोडफोड गर्नेलाई वीर गोर्खालीको एक्सन,सनातन धर्ममाथिको आक्रमण सैहय नहुने चेतावनी !
| प्रकाशित मितिः शनिबार, साउन ४, २०७६
काठमाडौ । शान्तिका अग्रदुत भगवान् गौतम बुद्ध को मुर्ति तोडफोड गर्नेलाई तत्काल कार्वाहीको मागगर्दै वीर गोर्खाली अभियानले शनिबार राजधानीमा दवाबमुलक कार्यक्रम गरेको छ ।
नेपालको सनातन धर्म,सस्कृति विरोधी तत्वले बुटवल-भैरहवा सडकखण्डमा राखिएका बुद्ध मुर्तिहरु तोडफोड गरेको भन्दै नेपालको सामाजिक ,सास्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा बारम्बार आक्रमण गर्ने जोसुकै भएपनी तत्काल छानबिन गरि कानुनी कार्वाहीको मागसहित राजधानीको स्वयम्भू मा वीर गोर्खालीले दवाबमुलक कार्यक्रम गरेको हो ।
नेपालको मौलिक मान्यता र परम्परालाई निरंतरता दिन स्थापना गरिएका विश्व शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्ध को मुर्ति माथिको तोडफोड कुनैपनी हिसाबले सैहय वीर गोर्खालीले चेतावनी दिएको छ । कार्यक्रममा वीर गोर्खालीले निकट विभिन्न ब्यक्ति तथा अभियान्ताले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यतिबेला रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको ६ लेन सडक खण्डमा राखिएका बुद्ध मूर्ति तोडफोड गरिएको प्रति सर्वत्र निन्दा भएको छ । बुद्दको जन्मभुमि मै बुद्ध को अपमान गरि मुर्ति तोडफोड भएको प्रती सर्बत्र निन्दा भएको हो ।
६ लेन सडकलाई आकर्षक बनाउन र पर्यटकहरूलाई बुद्धभूमिमा आएको अनुभूर्ति गराउने उद्देश्यले नगरपालिकाले योगिकुटीदेखि मंगलापुरसम्म बुद्धका मूर्ति राखेका थिए । ती मूर्तिमध्ये शंकरनगरदेखि ड्राइभर टोलसम्मका ५ वटा बुद्ध मूर्ति तोडफोड गरिएको अवस्थामा बिहीबार बिहान फेला परेको थियो।
बुधबारराति गरिएको तोडफोडबाट चार वटा बुद्ध मूर्ति ३ र ४ टुक्रा बनाइएको र एउटा मूर्तिलाई पटक र पटक प्रहार गरिएको अवस्थामा बिहिबार बिहान सडकमा भेटिएको थियो । सडकको मेडियनमा निर्माण गरिएका मूर्तिहरू कसले र किन फुटाएकोे भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, साउन ४, २०७६ 11:23:34 PM |
Prevयो बुद्धको जन्मभुमि हो ,यहाँ हिंसा अस्वीकार्य छ : मन्त्री बाँस्कोटा
Nextगुठीको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण माग गर्दै समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र